ဘန်းစကားလေ့လာကြမလား (Are You Up for Slang? by Tom Hayton) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on January 3, 2011 at 14:46 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဘန်းစကား ဆိုလျှင် နားလည်မှု လွဲတတ်ကြပါသည်။ ဦးစွာ ရှင်းလင်းလိုသည့် အချက်တစ်ချက်မှာ ''ဘန်းစကား'' သည် အလွတ်သဘော နှုတ်ဖြင့် သို့မဟုတ် စာဖြင့် သိစေသော စကားစု အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ဘဝထဲကအသုံးအနှုန်း ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ အသံထွက်မှန်ခြင်း သို့မဟုတ် စကားဝဲခြင်းနှင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ။
ဘန်းစကားကို ဒေသအလိုက် သို့မဟုတ် လူမှုအုပ်စုအလိုက် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လေ့ ရှိပါသည်။ လူမှုရေး ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် လျင်မြန်စွာ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြီး နေ့ချင်းညချင်း ပျောက်ကွယ်သွားတတ် ပါသည်။ အချို့သော ဘန်းစကားများကို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ အလွတ်သဘော ဆက်လက် သုံးစွဲနေကြ ခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။ တရားဝင် ခန့်ညားစွာ အထူးသဖြင့် စာဖြင့်ရေးသား သုံးနှုန်းရာ၌ ဘန်းစကား ကို မသင့်တော်ဟု သာမန်အားဖြင့် ယူဆပါသည်။
ဗြိတိသျှဘန်းစကားအချို့ကို ဥပမာ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
၂။ sack (something) off
၃။a(total/absolute/complete) mare
၄။ up for it
၅။ to cane something
စာရှုသူသည် ယင်းဘန်းစကားအသုံးအနှုန်းများနှင့် အကျွမ်းတဝင် ရှိပါသလား။ အဓိပ္ပာယ်များကို အစဉ်လိုက် မဟုတ်ဘဲ ရောမွှေလျက် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
(က) စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့နေပြီဖြစ်သော တစ်စုံတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်/စွန့်ပစ်/အဆုံးသတ်သည်
to abandon/quite/end something you are fed up with
(ခ) တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန် စိတ်အားထက်သန်သည်
(ဂ) အားပါးတရ စိတ်အားထက်သန်စွာ စားသုံးသည် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်သည်
to consume or perform and act with vigour and enthusiasm
(င) ဆိုးဝါးသော အတွေ့အကြုံ
အဖြေများကို ဆောင်းပါးအဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ယင်းဘန်းစကားများ အသုံးပြုပုံ ဥပမာအချို့ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။
၁။ He’sareally good bloke. Reliable. ဒီကောင်တကယ့်လူကောင်းပါ။ စိတ်ချရတယ်။
၂။ I think you should sack it off. It’s not going anywhere. ဆက်မလုပ်တော့တာ ကောင်းမယ် ထင်တယ်၊ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၃။ That meeting was an absolute mare. Khalid just wouldn’t stop going on about his figures. အစည်းအဝေးကတော့ တကယ့် စိတ်ပျက်စရာပါဘဲ၊ ခါလစ်က ကိန်းဂဏန်းတွေကို မရပ်မနားပြောနေ တော့တာဘဲ။
၄။ So are you up for dinner to night? Maybe we could meet around 8? ဒီည ညစာစားဖို့ စိတ်ဝင်စားသလား၊ ၈နာရီလောက် တွေ့ကြမလား။
၅။ I don’t have much time to prepare slides so I’m going cane ’em during lunch time. ဆလိုက်တွေ လုပ်ဖို့ အချိန်သိပ်မရှိဘူး၊ နေ့လည်စာစားချိန်မှဘဲ အသည်းအသန် လုပ်ရတော့မှာဘဲ။
ဘန်းစကားများသည် ပြောစကားအသွင်ဖြင့် ကာလကြာရှည် တည်ရှိပြီး ပြန့်နှံ့အသုံးပြုနေကြပြီးမှ စာဖြင့် ရေးသားခြင်း၊ အဘိဓာန်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ခံရလေ့ ရှိပါသည်။ ဘန်းစကား အတော်များများမှာ ယင်းသို့ အသိအမှတ်ပြုမှုမျိုး လုံးဝမရရှိကြပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာများမှာ အတော်အတန် အတွေ့ရများသော ဘန်းစကားများဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှအများစုနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မိခင်ဘာသာအဖြစ် ပြောကြားသော အခြားသူအများအပြားက နားလည်ကြပါသည်။ (စကားအဆက်အစပ်ကိုကြည့်၍ မှန်းဆနိုင်ပါသည်။)
ဘန်းစကားသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသနည်း။ လူတိုင်းအသုံးပြုကြပြီး လူမှုဆက်ဆံရေး၏ အမှတ်လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ ဘန်းစကားကို နားလည်ခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းသည် ဘာသာစကားအုပ်စုတစ်စုအတွင်း လက်ခံမှုရရှိရန် လိုအပ်ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာစကား သင်တန်းအများအပြားတွင် ပိုမို၍ ခန့်ညားတည်တံ့သော စကားအသုံးအနှုန်းများကို သာ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပြီး ဘန်းစကားကို လျစ်လျူရှုတတ်ကြပါသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော ဘာသာ စကား အသုံးအနှုန်းများကို သိရှိနားလည်ရန် အရေးကြီးသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သို့သော် လူအများနှင့် အမှန်တကယ် ထိတွေ့ဆက်ဆံမည်ဆိုပါက အထူးသဖြင့် နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရမည်ဆိုလျှင် ဘန်းစကား သည် အထူးအရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ခန့်ညားတည်တံ့သော စကားအသုံးအနှုန်းများ ကို လိုသည်ထက်ပို၍ အားထားအသုံးပြုနေခြင်းဖြင့် စာအုပ်ဆန်သည်၊ ရှေးဆန်သည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု မလုံလောက် သို့မဟုတ် ''လူတွေနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိသူ'' ဟူ၍ တစ်ဖက်သားက ထင်မြင်ယူဆသွားနိုင် ပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း ဘန်းစကားမှာ အရေးကြီးပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ရာတွင် နေ့လည်စာ စားရင်း၊ ပွဲလမ်းအခမ်းအနားတက်ရင်း၊ ဂေါက်သီးကစားရင်း အလွတ်သဘော အခြေအနေများတွင် အများအပြား လုပ်ကိုင်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် ဘန်းစကားကို အသုံးပြုရာ၌ သတိထားရပါမည်။ ဘန်းစကားနှင့် ပိုမို၍ တည်ကြည်ခန့်ညားသော 'ပုံမှန်' စကားအသုံးအနှုန်းများကို သူ့နေရာနှင့်သူ လိုက်လျောညီထွေ သုံးစွဲရပါသည်။ ဘန်းစကား အများအပြားမှာ ဘဝထဲက စကားအသုံးအနှုန်းများဖြစ်၍ ဘဝအနံ့အသက်များ ပါဝင်နေတတ်ပါသည်။ အသုံးပြုမည့် ဘန်းစကားအသုံးအနှုန်းများမှာ တစ်ဖက်သား စိတ်ဆိုးစရာ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်၊ စိတ်ဆိုးစရာ ဖြစ်နိုင်လျှင်လည်း အဘယ်ကြောင့် စိတ်ဆိုးစရာဖြစ်နိုင်သည်ကို စစ်ဆေးစိစစ် လေ့လာထားဖို့ မမေ့ပါနှင့်။
Peevish.co.uk ကဲ့သို့သော ဘန်းစကားအဘိဓာန်ကောင်းကောင်း တစ်ခုကို ရှာဖွေ၍ အသုံးပြုပါက အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
Haveagood one (ဘန်းစကားတတ်၍ ပျော်ရွှင်ပါစေ)
၁-ဃ ၂-က ၃-င ၄-ခ ၅-ဂ
(Tom Hayton ၏ Are You Up for Slang? အားဆီလျော်သလိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/are-you-up-for-slang-by-tom မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
ဘနျးစကား ဆိုလြှငျ နားလညျမှု လှဲတတျကွပါသညျ။ ဦးစှာ ရှငျးလငျးလိုသညျ့ အခကျြတဈခကျြမှာ ''ဘနျးစကား'' သညျ အလှတျသဘော နှုတျဖွငျ့ သို့မဟုတျ စာဖွငျ့ သိစသေော စကားစု အမြိုးအစား တဈမြိုး ဖွဈပါသညျ။ ဘဝထဲကအသုံးအနှုနျး ဟုလညျး ဆိုနိုငျပါသညျ။ အသံထှကျမှနျခွငျး သို့မဟုတျ စကားဝဲခွငျးနှငျ့ လုံးဝ မသကျဆိုငျပါ။
ဘနျးစကားကို ဒသေအလိုကျ သို့မဟုတျ လူမှုအုပျစုအလိုကျ အဓိပ်ပာယျသတျမှတျလေ့ ရှိပါသညျ။ လူမှုရေး ခတျေရစေီးကွောငျးအလိုကျ လငျြမွနျစှာ ပျေါပေါကျလာတတျပွီး နခေ့ငျြးညခငျြး ပြောကျကှယျသှားတတျ ပါသညျ။ အခြို့သော ဘနျးစကားမြားကို ရာစုနှဈပေါငျးမြားစှာ အလှတျသဘော ဆကျလကျ သုံးစှဲနကွေ ခွငျးမြားလညျး ရှိပါသညျ။ တရားဝငျ ခနျ့ညားစှာ အထူးသဖွငျ့ စာဖွငျ့ရေးသား သုံးနှုနျးရာ၌ ဘနျးစကား ကို မသငျ့တျောဟု သာမနျအားဖွငျ့ ယူဆပါသညျ။
ဗွိတိသြှဘနျးစကားအခြို့ကို ဥပမာ ဖျောပွလိုကျပါသညျ။
စာရှုသူသညျ ယငျးဘနျးစကားအသုံးအနှုနျးမြားနှငျ့ အကြှမျးတဝငျ ရှိပါသလား။ အဓိပ်ပာယျမြားကို အစဉျလိုကျ မဟုတျဘဲ ရောမှလေကျြ အောကျတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ။
(က) စိတျပကျြငွီးငှနေ့ပွေီဖွဈသော တဈစုံတဈခုကို စှနျ့လှတျ/စှနျ့ပဈ/အဆုံးသတျသညျ
(ခ) တဈစုံတဈခုကို ပွုလုပျရနျ စိတျအားထကျသနျသညျ
(ဂ) အားပါးတရ စိတျအားထကျသနျစှာ စားသုံးသညျ သို့မဟုတျ လုပျဆောငျသညျ
(င) ဆိုးဝါးသော အတှအေ့ကွုံ
အဖွမြေားကို ဆောငျးပါးအဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ။ ယငျးဘနျးစကားမြား အသုံးပွုပုံ ဥပမာအခြို့ကို ဆကျလကျဖျောပွပါမညျ။
၁။ He’sareally good bloke. Reliable. ဒီကောငျတကယျ့လူကောငျးပါ။ စိတျခရြတယျ။
၂။ I think you should sack it off. It’s not going anywhere. ဆကျမလုပျတော့တာ ကောငျးမယျ ထငျတယျ၊ ဘာမှ ဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူး။
၃။ That meeting was an absolute mare. Khalid just wouldn’t stop going on about his figures. အစညျးအဝေးကတော့ တကယျ့ စိတျပကျြစရာပါဘဲ၊ ခါလဈက ကိနျးဂဏနျးတှကေို မရပျမနားပွောနေ တော့တာဘဲ။
၄။ So are you up for dinner to night? Maybe we could meet around 8? ဒီည ညစာစားဖို့ စိတျဝငျစားသလား၊ ၈နာရီလောကျ တှကွေ့မလား။
၅။ I don’t have much time to prepare slides so I’m going cane ’em during lunch time. ဆလိုကျတှေ လုပျဖို့ အခြိနျသိပျမရှိဘူး၊ နလေ့ညျစာစားခြိနျမှဘဲ အသညျးအသနျ လုပျရတော့မှာဘဲ။
ဘနျးစကားမြားသညျ ပွောစကားအသှငျဖွငျ့ ကာလကွာရှညျ တညျရှိပွီး ပွနျ့နှံ့အသုံးပွုနကွေပွီးမှ စာဖွငျ့ ရေးသားခွငျး၊ အဘိဓာနျမြားတှငျ မှတျတမျးတငျခွငျး ခံရလေ့ ရှိပါသညျ။ ဘနျးစကား အတျောမြားမြားမှာ ယငျးသို့ အသိအမှတျပွုမှုမြိုး လုံးဝမရရှိကွပါ။
အထကျဖျောပွပါ ဥပမာမြားမှာ အတျောအတနျ အတှရေ့မြားသော ဘနျးစကားမြားဖွဈပွီး ဗွိတိသြှအမြားစုနှငျ့ အင်ျဂလိပျဘာသာကို မိခငျဘာသာအဖွဈ ပွောကွားသော အခွားသူအမြားအပွားက နားလညျကွပါသညျ။ (စကားအဆကျအစပျကိုကွညျ့၍ မှနျးဆနိုငျပါသညျ။)
ဘနျးစကားသညျ အဘယျကွောငျ့ အရေးကွီးပါသနညျး။ လူတိုငျးအသုံးပွုကွပွီး လူမှုဆကျဆံရေး၏ အမှတျလက်ခဏာတဈရပျဖွဈသောကွောငျ့ အရေးကွီးပါသညျ။ ဘနျးစကားကို နားလညျခွငျးနှငျ့ ကြှမျးကငျြနိုငျနငျးစှာ အသုံးပွုနိုငျခွငျးသညျ ဘာသာစကားအုပျစုတဈစုအတှငျး လကျခံမှုရရှိရနျ လိုအပျခကျြ တဈရပျဖွဈပါသညျ။
ဘာသာစကား သငျတနျးအမြားအပွားတှငျ ပိုမို၍ ခနျ့ညားတညျတံ့သော စကားအသုံးအနှုနျးမြားကို သာ သငျကွားလကေ့ငျြ့ပေးပွီး ဘနျးစကားကို လဈြလြူရှုတတျကွပါသညျ။ စံသတျမှတျထားသော ဘာသာ စကား အသုံးအနှုနျးမြားကို သိရှိနားလညျရနျ အရေးကွီးသညျမှာ မှနျပါသညျ။ သို့သျော လူအမြားနှငျ့ အမှနျတကယျ ထိတှဆေ့ကျဆံမညျဆိုပါက အထူးသဖွငျ့ နှုတျဖွငျ့ ပွောဆိုဆကျဆံရမညျဆိုလြှငျ ဘနျးစကား သညျ အထူးအရေးပါသော အခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျပါသညျ။ ခနျ့ညားတညျတံ့သော စကားအသုံးအနှုနျးမြား ကို လိုသညျထကျပို၍ အားထားအသုံးပွုနခွေငျးဖွငျ့ စာအုပျဆနျသညျ၊ ရှေးဆနျသညျ ပေါငျးသငျးဆကျဆံမှု မလုံလောကျ သို့မဟုတျ ''လူတှနှေငျ့ ထိတှမှေု့မရှိသူ'' ဟူ၍ တဈဖကျသားက ထငျမွငျယူဆသှားနိုငျ ပါသညျ။
စီးပှားရေးလုပျကိုငျရာတှငျလညျး ဘနျးစကားမှာ အရေးကွီးပါသညျ။ စီးပှားရေးလုပျရာတှငျ နလေ့ညျစာ စားရငျး၊ ပှဲလမျးအခမျးအနားတကျရငျး၊ ဂေါကျသီးကစားရငျး အလှတျသဘော အခွအေနမြေားတှငျ အမြားအပွား လုပျကိုငျရခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။
သို့ရာတှငျ ဘနျးစကားကို အသုံးပွုရာ၌ သတိထားရပါမညျ။ ဘနျးစကားနှငျ့ ပိုမို၍ တညျကွညျခနျ့ညားသော 'ပုံမှနျ' စကားအသုံးအနှုနျးမြားကို သူ့နရောနှငျ့သူ လိုကျလြောညီထှေ သုံးစှဲရပါသညျ။ ဘနျးစကား အမြားအပွားမှာ ဘဝထဲက စကားအသုံးအနှုနျးမြားဖွဈ၍ ဘဝအနံ့အသကျမြား ပါဝငျနတေတျပါသညျ။ အသုံးပွုမညျ့ ဘနျးစကားအသုံးအနှုနျးမြားမှာ တဈဖကျသား စိတျဆိုးစရာ ဖွဈနိုငျမဖွဈနိုငျ၊ စိတျဆိုးစရာ ဖွဈနိုငျလြှငျလညျး အဘယျကွောငျ့ စိတျဆိုးစရာဖွဈနိုငျသညျကို စဈဆေးစိစဈ လလေ့ာထားဖို့ မမပေ့ါနှငျ့။
Peevish.co.uk ကဲ့သို့သော ဘနျးစကားအဘိဓာနျကောငျးကောငျး တဈခုကို ရှာဖှေ၍ အသုံးပွုပါက အထောကျအကူဖွဈပါလိမျ့မညျ။
Haveagood one (ဘနျးစကားတတျ၍ ပြျောရှငျပါစေ)
(Tom Hayton ၏ Are You Up for Slang? အားဆီလြျောသလိုဘာသာပွနျဆိုထားပါသညျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ ရေးသားထားသော မူလဆောငျးပါးနှငျ့ အခွားစိတျဝငျစားဖှယျဆောငျးပါးမြားအား ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။)
အထကျပါ ဆောငျးပါးအားကူးယူ၍ အခွား website နှငျ့ blog မြားတှငျ တငျမညျဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/are-you-up-for-slang-by-tom မှကူးယူကွောငျး ထညျ့သှငျးဖျောပွပေးပါရနျ။
Permalink Reply by jc on January 4, 2011 at 17:35
I m ready for it... Where's other folks to do it? let me join plz...
Permalink Reply by jc on January 4, 2011 at 18:36
so awesome... why dont u put more posts for us?
Permalink Reply by Linhtet on January 5, 2011 at 4:24
Permalink Reply by kyaw thu on January 6, 2011 at 18:53
Permalink Reply by lizzie on January 7, 2011 at 17:22
I also wanna learn others
Permalink Reply by kc8 on January 11, 2011 at 19:01
Permalink Reply by 000lxvbrj9cel on January 26, 2011 at 17:48
Permalink Reply by lai lai on January 30, 2011 at 15:00
Permalink Reply by kyaw phyo han on February 4, 2011 at 20:28
Permalink Reply by 2zoteoi0r1ztg on September 6, 2011 at 10:08
Permalink Reply by thant zin tun on October 11, 2012 at 15:36
Permalink Reply by Larchanlisu on August 19, 2015 at 17:27